सामाजिक छुट: तपाइँको ग्राहकहरु लाई साझा जब तिनीहरु पुरस्कार: | Martech Zone
सामाजिक छुट: तपाइँको ग्राहकहरु लाई साझा जब तिनीहरु पुरस्कृत गर्नुहोस्
बुधबार, नोभेम्बर 20, 2013 बुधबार, नोभेम्बर 20, 2013 Douglas Karr
धेरै व्यक्तिले छुट र नयाँ ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न को प्रस्ताव। यो धेरै मूर्ख छ जब तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, कसरी पुरस्कृत ग्राहकहरू बारेमा जुन पहिले नै पैसा खर्च गर्दैछ? वास्तवमा, पुरस्कृत ग्राहकहरूको बारेमा के हो जुन तथ्यहरू साझा गर्छन् कि तिनीहरूले तपाईंबाट उनीहरूको सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत खरीद गरेका छन्?
हाल 30०% भन्दा बढी रूपान्तरण दरमा ट्र्याक गर्दै, सामाजिक छुट एक शानदार प्लेटफर्म हो। तपाईले मुख मार्केटिंगको शव्द मात्र प्रयोग गरिरहनु भएको छैन, तपाई आफ्नो उत्तम ग्राहकहरुलाई पुरस्कार दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई फिर्ता र अधिक खरीद गर्न छुट प्रदान गर्दै! यो सबै संसारमा सबै भन्दा राम्रो छ!
फेसबुक, ट्विटर, Google+, Pinterest, र LinkedIn भर मा तपाइँको ब्रान्ड साझा गर्न को लागी तपाइँको ग्राहकहरु लाई तिर्न को लागी यातायात को आधार मा आफ्नो वर्तमान खरीदहरु नगद कमाउन को लागी ग्राहकहरु किराए। तपाईंको सन्देश तुरुन्तै उनीहरूको साथीहरूको टाइमलाइन, फिड, र बोर्डहरूमा सम्मिलित हुन्छ - कम प्रभाव वेब विज्ञापनको रूपमा होइन, तर शक्तिशाली ट्रेन्डिंग शीर्षकहरू जुन वास्तवमा हेरिएको र पढिएको छ।
चेक आउट गर्दा, तपाईंको ग्राहकहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको मार्केटिंग साझा गर्दा उनीहरूको हालको खरीद फिर्ताबाट पूर्व निर्धारित प्रतिशत कमाउन विकल्प दिइन्छ। तिनीहरू तुरुन्त नगद फिर्ता केवल पोस्ट गर्नका लागि कमाउन सक्छन् - र त्यसपछि अझ धेरै कमाउन सक्दछन् जब उनीहरूका साथीहरूले तपाईंको पोष्ट गरिएको लिंकमा क्लिक गर्छन्।
सबै भन्दा राम्रो, सामाजिक छुट जोखिम मुक्त छ। सफ्टवेयर स्थापना गर्न कुनै शुल्क छैन र तिनीहरूले केवल नयाँ ग्राहकहरु डेलिभर गर्दा मात्र भुक्तान गरिन्छ। सामाजिक रिबेट शुल्क १ customers% छ जुन तपाइँको ग्राहकहरु द्वारा दावी गरिएको छ। यसको मतलब यदि तपाईले छुटमा १०.०० डलर दिनु भयो भने, सामाजिक रिबेट सेवा शुल्क १.15० डलर हुनेछ। यसले सबै लेनदेन, प्रशोधन, र डिलिभरी लागतहरूलाई कभर गर्दछ।
टैग: प्रोत्साहनछूटसामाजिक वाणिज्यसामाजिक कुपनसामाजिक ईकामर्ससामाजिक छुटमुखको कुरा
कसरी पीपीसीले इनबाउन्ड मार्केटि En बढाउँदछ
ट्रिगर ईमेलका फाइदाहरू